Mmasị Onwe Onye. Yabụ kedu mmekọrịta dị mma?
Mmekọrịta dị mma bụ mgbe mmadụ abụọ ha na ibe ha mepụtara njikọ dabere na: Nkwanye ugwu, ntụkwasị obi, ime ihe n'eziokwu, Nkwado, izi ezi / nha anya, Aha iche, Ezi nkwukọrịta na Echiche nke egwuri egwu / mmasị. Nzọụkwụ mbụ ịchọta Sugarlove® bụ ịtụgharị uche ụfọdụ nghọtahie banyere mkpakọrịta nwoke na nwanyị yana mmekọrịta nwere ike igbochi gị ịchọta Sugarlove® na-adịgide adịgide. Ọtụtụ mgbe, ọ bụ n'ihi na ị na-elekwasị anya na "oyiyi" na "ugwu" si otú ahụ "AHOD", kama ime Mind & Soul gị isi mkpa!
Ọhụrụ Suger hụrụ gị na-eche!
Jikọọ n'okpuru 30 sekọnd ma bido shuga!
Anyị ga-akuziri gị otu ị ga - esi họrọ ezigbo mkpụrụ obi nke dabara na uche gị, Isi na Mkpụrụ obi.
Dịka i meela maka ọrụ nke ọma, anyị na-arịọ gị ka ị dee mkpirisi mkpirisi iji wee rụọ ọrụ na ibe ““ga nke Ọma”.
Zute Singles Na Mpaghara Gị!
Saịtị a bụ otu n'ime saịtị kacha mma International mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Ma ị na-achọ onye na-achụ ọsọ ọsọ, mkpakọrịta nwoke na nwaanyị maka ndị agadi ma ọ bụ ịhụnanya!